Sidee Harvard u baahisaa in ka badan 300 Dhacdooyin isboorti sanad walba oo ay la socdaan laba koox oo waqti buuxa ah | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerinka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Sidee Harvard u baahisaa in ka badan Dhacdooyinka 300 dhacdooyinka isboorti sanad walba oo ay la socdaan laba koox oo waqti buuxa ah
Sidee Harvard u baahisaa in ka badan Dhacdooyinka 300 dhacdooyinka isboorti sanad walba oo ay la socdaan laba koox oo waqti buuxa ah
Waxaa Qoray: Imry Halevi
Kaaliyaha Agaasimaha Ciyaaraha fudud, Muuqaal iyo Waxsoosaar, Jaamacadda Harvard
Himiladeenna bixinta bixinta baahinta dhacdooyinka isboortiga ee Harvard ayaa xoogaa ka yara durugsan kiisaska isticmaalka caadiga ah markii aan fiirineyno soosaaraha fiidiyowga badan ee isboortiga tooska ah. Durdurrada tooska ah ee dhacdooyinkayaga isboorti waxay wadaagaan isla ujeeddooyinka waaxda isgaarsiinta Harvard guud ahaan. Kuwaasi waa:
U sheeg sheekada Harvard adduunka
Dhawr taariikhda Harvard taariikhda sheekadan
Xaqiiqda ka jirta Harvard waa inaan lahaan karno madaxweynaha mustaqbalka ee Mareykanka ee ku tartamaya kubbadda koleyga, polo biyaha, rooga, ama teniska. John F. Kennedy wuxuu halkan kubad ka ciyaaray. Siyaasiyiinta, garsoorayaasha, agaasimayaasha, jileyaasha, curiyaameyaasha iyo shaqsiyaadka waa kuwa ku caan baxay magacyadeena - inbadan oo kamid ahna waxay kaqeyb galeen ciyaaraha fudud ee Harvard.
Sababtan awgeed, waxaan leenahay waajibaad ahaan inaan ilaalino taariikhda si aan u diiwaangelinno ciyaaro iyo tartamo badan intii suurtogal ah. Taasi waa sababta aan waaxdeyda ugu xilsaartay baahinta 32 ee qeybteenna isboorti ee 42. Waxaan soo saareynaa in ka badan 300 war baahin shaqsiyeed sanadkasta oo ka soo baxa isboortiga soo socda:
Kubadda Koleyga Haweenka
Kubadda Koleyga ragga
Haweenka Hockey Ice
Ragga barafka loo yaqaan 'Ice Hockey'
Kubadda Cagta Haweenka
Haweenka Biyo Biyoodka
Dabaasha Haweenka & Quusitaanka
Dabaasha & Quusitaanka Ragga
Raadinta & Goobta Haweenka Gudaha
Raadinta & Goobta Ragga Gudaha
Row culus ee Haweenka
Row culus ee Ragga
Rowing Light Haweenka
Rowing Ragga fudud
Gabdhaha Kubadda Cagta
In kasta oo aan dhaqaale ahaan lagu dhaqaajin dadaalkan, haddana waa inaan tixgelinno kharashyada. Si tan loo sameeyo, waxaan ku tiirsan nahay tikniyoolajiyadaha aan si fudud “la awoodi karo” laakiin taa badalkeeda loo yareeyo walwalka xilliyada, yareynta shuruudaha shaqaalaha, loona isticmaali karo kaabayaasha dhismaha kambani sida - taasi macnaheedu waa yareynta yareynta fiilada SDI oo aan keenin 55- Gawaarida OB-dhaadheer.
Shaqaalahayga dadaaladan waa nafteyda iyo maareeye ilaaliyaha. Waxaan nahay shaqaalaha keliya ee waqti buuxa shaqeeya. Waxaan nasiib u leenahay inaan heysano seddex shaqo barasho ah oo ka shaqeynaya wareegyada 10-bilood, waxaan sidoo kale u adeegsannaa ardayda iyo ardayda dhowaan ka qalin jabisay jaamacadaha iyo kulliyadaha ku yaal aagagga raadinaya khibrad shaqo oo wax ku ool ah. Harvard ma leh tababbar warbaahin ama fiidiyoow waxbarasho ah. Tan macnaheedu waa ficil ahaan waa in dhammaan tikniyoolajiyadda aan adeegsanno waa inay noqotaa kuwo caqli-gal ah oo wax-barana.
Baahiyahaas oo dhan aawadood, waanu ku kalsoonnahay NewTek wax soo saarka iyo gaar ahaan borotokooladooda NDI. In aan dhibic aad ufiican la dul dhigin, laakiin la'aantiis haddii aan tani suuragal aheyn. Waxaan u adeegsaneynaa NDI meel kasta iyo waqtiga oo dhan.
Hay'adda NDI waxay u isticmaashaa kaabayaasha network ee hadda jira ee Harvard inay u diraan oo ay u helaan calaamadaha fiidiyowga ee loo isticmaalo qulqulka baahinta idaacadda. Iyo, sababta oo ah waa hab-ku-adeegsi-bilaash ah, waxaan awoodnaa inaan ku isticmaalno meel kasta, heer ahaan, iyo dabacsanaan leh. Isbedelada boosaska kamarada, shabakada, ama tikniyoolajiyada qulqulka shaqadu saameyn kuma yeelanayso helitaanka ilahayada fiidiyowga.
Marka laga hadlayo qulqulka jirkeena, waxaan leenahay labo qol oo kontaroolo oo waaweyn. Qolka xakamaynta kubbadda koleyga wuxuu leeyahay TriCaster TC1 oo aan u isticmaalno soosaarka warfaafinta iyo TriCaster 860 aan u isticmaalno guddiga fiidiyowga. Sababta oo ah waxaan ka shaqeyneynaa isla jawi isku mid ah, waxaan si fudud oo dhaqso leh uga faa'iideysan karnaa ilaha fiidiyowga ee wax soosaarka qulqulkayaga iyo AV-ga gudaha. Tusaale ahaan, a NewTek Nidaamka dib u soo celinta isla markiiba ee 3 wuxuu quudiyaa labada TriCasters - isagoo siinaya iskucelcelin deg deg ah labada quudin hal kaliya oo wada shaqeeya.
Waxaan leenahay qol kontarool oo labaad oo loo isticmaalo kubada cagta, lacrosse iyo hockey. Qulqulka shaqada ayaa la mid ah kaas oo aan uga faa'iideysano TriCaster 8000 si loo baahiyo, iyo TriCaster 460 looxyada vidiyoga. Waxaan sidoo kale leenahay laba NewTek Qeybaha 3Play 4800 qolkaas, oo noo oggolaanaya inaan soo saarno illaa laba warbaahinno madax-bannaan isla waqti isku mid ah.
Iyada oo qolalka kantaroolka ah ay u xilsaareen dhowr isboorti oo u dhawaa masaafada ugu dhow, waxaa loo isticmaali karaa isboorti kasta ee ku xiran shabakadda. Adeegsiga NDI micnaheedu waa inaan si wax ku ool ah uga wareegi karno / toos ugala socon karno qolka kontaroolada - meel kasta oo isboortigu ka dhacayo
Waxaan u adeegsanaa kaamirooyinka JVC dhamaan guddiga - labadaba kamarado la duubay iyo PTZ. Haddii aan u baahan nahay inaan ka bixiyo quudinta meel aan lahayn fiber ama SDI isku xirnaan, waxaan u adeegsanaa NewTek Ku xidh-beddelayaasha Spark NDI, kuwaas oo keena quudinta shabakadda.
Ugu dambeyntiina, waxaan u adeegsanaa TriCaster Mini sidii beddelidda taageerada. Haysashada tan oo kayd ah ayaa u oggolaaneysa dabacsanaan dheeri ah maadaama aan u gayn karno meel bannaanka ka ah oo aan uga dhigi karno sidii nooc ka mid ah xarun NDI, ama xitaa wareejin / toos toosinta quudinta goobta 'Mini onsite'.
Natiijooyinka tan waa kuwo muuqda - marka loo eego dhinaca waxqabadka ah - maaddaama wax soo saarku uu dhacayo iyada oo aan wax qabasho ah. Waxaan awoodnaa inaan si dhakhso ah u tababarto shaqaale cusub oo aan hubinno warbaahin xirfadle ah maalin kasta. Waxaan ka maqleynaa taageerayaasha marwalba sida ay u qiimeeyaan tayada sheyga - ha ahaato kubada cagta ama deedka.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan gaarnaa hadafkeena ah diiwaangelinta taariikhda Harvard iyo inaan la wadaagno farriinta ardayda-ciyaaraha fudud adduunka. Iskuulku wuxuu eegaa natiijooyinka aan ku helnay miisaaniyada naloo siiyay waana ay yaqaanaan inaan ku dhameysanay wax la yaab leh.
Midkoodna taas laguma gaari karo la'aanteed NewTek xalalka lagu xoojiyay NDI.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Graham Chapman Prmoted toEditor NewTek Waran & Fallaaro TVU Networks Video Engineer 2019-10-25
Previous: “Waa inaysan weynaaneyn” Loogu Magac Daray Abaalmarinta 2019 HPA Abaalmarinta Garsoorayaasha Abuurista iyo curinta
Next: Khabiirka Caafimaadka Maskaxda 1 (Caafimaadka Maskaxda Dadka Waaweyn) - Hood River, Oregon